Qaranku Aw Cali oo kale ayuu u baahanyahay:
Inta aanan Aw Cali xusin, waxaan ka tacsiyeynayaa geeridii madaxda iyo waxgaradka lagu xasuuqay Hotel Saxafi, anoo intii ka badbaadeyna allaha uga mahdinaya.
AW Cali waa saaxiib, Ehlu Suna ah, wadanka ku laabtay si uu wax ula qaybsado asxaabtiisa xiligii Madaxweyne Sh Shariif, waxa uu wax kasoo bartay wixii dhulka yiil, waxa uu ku takhasusay amniga iyo talaabooyinka argagixisada, waxa uu ku soo laabtay UK 2012 _kii, majiro xiriir toos ah oo talada uu la wadaago dhinaca DFS, balse waxaa naga dhaxeeya isweydiin iyo xal u doonid dhibta jirta, markaan talo iyo isweydiin iskugu nimaano ayaa waxa I yaabgasha sida ayan dowladiisu war ugu hayn ugana faa'iideysaneyn Aw Cali oo kale.
4 Maalmood ka hor ayaan wareysi isugu nimid, balse waxaa I yaabgashay markuu hal mar dhinacayga u soo jeestay asaga oo leh War Muxyadiin Xamar la hadal oo dadkagii war geli, saan iri maxaa jira !!! Suu yiri Qoladii baan aqaanaa maadaama maalmahan ayan waxba qarxin .... waxa ay daydayayaan Jug Culus oo ay geystaan....marka xiligoodii ayaa la joogaa.
Uma aanan arag wax aan ka aheyn mala awaal, balse maanta waxaan u arkay nin fahamsan waxa jira, waxa imaan karana ay u muuqdaan loona baahan yahay in laga faa'ideysto.
Waxaan wacey maanta si aan u wargasho. Balse wuxuu igu yiri ha I oran waxbaad ka ogeyd...saan ku iri ku oran mayee hadaan digniintaadii gudbin laheyn sow maanta Dhagabadan, Abtidoon iyo Ilqayte ma badbaadeen iyo xubnihii kaleba....suu yiri hadii la fahamsan yahay sida ay wax u wadaan Nabaddiidku wax weyn ayaa laga qaban lahaa.
Gabagabo Aw Cali iyo inta la mid ka ah ee haya talada iyo khibrada wadanku u baahan yahan ayaga oo aanan waxba ku dooneyna inay gutaan raba waajibaadkooda , waa in ay jiraaan khadad ay maraan iyo albaabo u furan si looga faa'ideysto.